သတင်းပဒေသာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သတင်းပဒေသာ
Posted by same kyaw on Jul 31, 2012 in Myanma News, Opinions & Discussion |9comments
Myanmar News သ တင္း ပ ေဒ သာ
သတင်းဆို ပေမဲ့ သတင်းဆိုတာ တခါတလေ အတင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ခုဟာ ကအမှန်တိုင်းပြောရင် သူများရေးသလို စာရေးချင်တယ် ။မရေးတတ်တော့ ကြံဖန်ပြီး ရေးတင်လိုက်တာပါ။သတင်းဖတ်ဖို့ မအားသူများ အတွက် စေတနာနဲ့ စုစည်းတင်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ဖတ်ပြီးသူများဖြစ်ရင်လည်း ပြန်ဖတ်ပါ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။အပြစ်မပေးပါဘူး။
ပထမဆုံးအတင်း မှားလို့ သတင်းက
မြန်မာနို်င်ငံ မှာ မကြုံစဖူးပါ ထိုင်းအိမ်ရှေ့မင်းသား မဟာ ဝချိရာလုံကွန်( 28/07/1952) ရဲ့ အသက် ၆ဝ ပြည့်မွေးနေ့ကို မြောက်ဒဂုံမှာ ဒီလ ၂၉ရက်နေ့ ကပြုလုပ်သွားတယ်။ဘုန်းကြီး အပါး ၆ဝကို ဆွမ်းကပ်ပြီး ထိုင်းသံအမတ်ကြီး က ထိုင်းဘတ် တသိန်းကို လှုသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။
လှုလို့ပိုက်ဆံ ရတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်ဒီလို လုပ်တာလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ထိုင်းဆိုတာ မြန်မာပြည်ကနေ သွားရင်တခေါ်သာသာပါ။
အဆိုးမြင်ဝါဒီတော့ မဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် တခါတလေ စိုးရိမ်မှု့တွေ လွန်ပြီး အဆိုးမြင်ဝါဒီ ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ ကျေနပ်တယ်။ ဘယ်သူဘာထင်ထင်။ထိုင်းဟာ မြန်မာပြည်ကို အခဲမကြေတဲ့နိုင်ငံမှာ ပထမနေရာယူထား တာ သူတို့ကလေးတွေ ရဲ့ ကျောင်းစာတွေ ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။ထိုင်းကလေးက အစ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းက ထိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စာကိုသင်ပြီးသား သိတယ်။စာကျေပြီးသား။ထိုင်းတွေ သမိုင်းဘာသာတော်ကြတယ်။မြန်မာနိ်ုင်ငံကို ဗေဒင် ယတြာတွေ အရလုပ်တယ်ဆို ရင် စိုးရိမ်းစရာပါ။
CPI က ဒါရိုက်တာ Mr Wang Quige က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြစ်ဆုံလာလေ့လာဖို့ဖိတ်ခဲ့တယ်။ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဥဏ်ဝင်းက ဒေါ်စု လွတ်တော်အစည်းအဝေနဲ့ ပြည်ပခရိးတွေ ကြောင့်မအားဘူးလို့ ငြင်းလိုက်တယ်လို့သိရတယ်။
CPI က မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနယ်မြေမှာ စက်ရုံ ၂ခုဆောက်ဖို့ ဝန်ကြီးချူပ်ဆီ ကိုတင်ပြတောင်းခံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။
တင်ပြတောင်းခံပြီး ဆိုတော့ ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။ပြီးသွားဘီးလား သဘောတူလား မသိပါဘူး။စက်ရုံက ဝါးတူ စက်ရုံနဲ့ ပရိဘောဂစက် ရုံ တဲ့။ ကဲ အရပ်ကတို့ ရေ သဘောတူလို့ကတော့ မြန်မာပြည် ရှိ သစ်တော အားလုံးကုန်ပြီးမှတ်။မထူးပါဘူး။အဖိုးတန်သစ်တွေ တရုတ်ကိုထမ်းပြီးပို့လိုက်မှ ကောင်းအုံးမယ်။စက်ရုံ ၂ရုံက မြစ်ဆုံလျှပ်စစ်စီမံ ကိန်း ဝင်းထဲမှာ ။အခုတောင် အဲ့ဒီဝင်းထဲမှာ ဘာတွေ လုပ်နေလဲဆို တာ မြန်မာ ဘက် ကဘယ်တုံးက သွားစစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီစက်ရုံ ၂ရုံဆောက် ရင်းနဲ့ မြစ်ဆုံကို အခိုင်အမာ စထားရင်ကော ဘာတတ်နိုင်လဲ။လုပ်ပြီးမှ ဖျက်လို့မရပါဘူးဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အနောက်ရိုးမကို စိမ်းလန်းစေဘို့ အော်စီ က ကူမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းက ကျွန်းထုတ်လုပ်မှု့ကို ၁၀၀%လုံး ဝလျှော့ချလိုက်ပြီး အခြားသစ်ထုတ်လုပ်မှု့ကို ၅၀%တိုးတယ်လို့ပြောပြီး ဧရာဝတီ တိုင်းကြီး စိမ်းလန်းရေး၊သစ်တောပြွန်းတီးမှု့ ကို ကာကွယ်မယ် လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်စိမ်းလန်းရေးကိုဖျက်မယ့် အဲ့ဒီစက်ရုံကိုထောင်လို့ ကတော့ သမင်မွေးရင်း ကျားစား ရင်းထက်ဆိုးဝါး သွားမှာပါ။
နောက်တခု က မြစ်ဆုံကို တရုတ်တွေ က သူတို့ပိုင်နယ်လိုလုပ်နေကြတာ ရင်နာစရာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာတုံးက ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒေါ်စု ကချယ်ရီတွေ ပွင့်တဲ့ မတ်လကုန် ၂၀၁၃ လောက်မှာ ဂျပန်ကိုအလယ်သွားမယ်တဲ့ ။
၂၀၁၄ မှာ မြန်မာတနို်င်ငံလုံးမှာ သန်ကောင်စာရင်းကောက်ယူမှာ ဖြစ်ပြီးကျောင်းဆရာ ဆရာမ သိန်းချီပြီး အသုံးပြုပြီး သန်ကောင်စာရင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးလုံး ဝ ပါမှာ
မဟုတ်ဘူးလို့ လဝက ဦးခင်ရီ ကတရားဝင်ပြောကြားခဲ့တယ်၊
ကောင်းပြီး ဒါဆို လောလောဆယ် မြန်မာပြည်အနှံမှာ ခိုးဝင်ပြီး ပေါ်တင်နေနေတဲ့ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ နဲ့တရုတ်တွေ ကို ဘယ်လို လုပ်မလဲ သိချင်မိပါတယ်။
ကုလ က စေလွတ်တဲ့ မစ္စတာ သောမတ် ကင်တားနား ၃ဝ ရက်နေ့ ကမြန်မာပြည်ကို ရောက်တယ်။အဓိကတော့ ရခိုင်ကိုသွားကြည့်ဘို့ပါ။ဒါပေမဲ့ သူလာတာ ပြည်ပ က ဘင်္ဂလီတွေ မြောက်ပေးလို့လာတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ရခိုင်ဆိုပေမဲ့ ကချင်ဒေသ လဲသွားမယ်ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့ရခိုင် အဓိကနယ်မြေ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောကို သွားမှာပါ။
၂၀၁၃ နှစ် ဆီးဂိမ်းအမှီ အကြွေး ဝယ်ကဒ် visa စတင်သုံးနို်င်ဘို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ကမ္ဘောဇ ဘဏ် ဒုဥက္ကဌ ဦးသန်းလွင် ကပြောပါတယ်။
အမေရိကန် က အမေရိကန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး အဖြစ် ဦးသန်းရွေ ကို သမ္မတ အိုဘားမား ကဘောတူလိုက်ပြီးလို့ပြောပါတယ်။
ဦးအောင်သိန်းလင်းကို လွတ်တော်အမတ် အဖြစ်က ရပ်စဲ ဘို့ သူ့မဲဆန္ဒနယ် ဖြစ်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာ က၁%ပြည့်ဘို့လက်မှတ်တွေ စုနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ကြံ၊ဖွံ့ က ဦးအောင်သိန်းလင်း southern news weekly ကို ပြောတဲ့ စကားကို စီစစ်ပြီး အရေးယူဘို့ လုပ်နေပြီးတဲ့။
ပခုက္ကူ ကလည်းဦးအောင်သိန်းလင်းကိုဒီနေ့ ၃၁၊၀၇။၂၀၁၂ ဆန္ဒပြဘို့ သက်ဆိုင်ရာက သဘောမတူလို့ပျက်သွားဘီးတဲ့။ပခုက္ကူ ကစရင် ကြောက်ရတယ်တဲ့လေ။
အမျိုးသမီး တယောက်အိပ်နေတုံး ဓါမြ ဝင်တိုက် တာ GSM ဖုံးကဒ်တွေ လဲပါသွားတယ်တဲ့ ။အဲ့ဒီ ဖုံး ကဒ် ကစပြီး သဲလွန်စ လိုက်တာ တရားခံ ကို ကျောက်တန်းမှာမိတယ်တဲ့
ဒါဆို လွတ်တော ်အမတ် ဦးသိန်းညွန့်ကို ၂ခါ ဖုံးနဲ့ ချိန်းခြောက်တဲ့ ဖုံး ပိုင်ရှင်တွေ ကိုကော ဘာလို့မ မိတာလဲမသိဘူး။စဉ်းစားမိတာလေတွေ
တနှစ် ကို မြန်မာနို်င်ငံ က ဆင်တွေ အကောင် ၅ဝ ကနေ ၁၀ဝထိ ထိုင်းဘက်ကို မှောင်ခို ကူးကြတယ်တဲ့ ဒါတောင် အစွယ်ခိုုး ဖြတ်လို့ သေသွားတဲ့ဆင် တွေ မပါသေးဘူး။
စင်္ကာပူ ကမြန်မာ သဲဝယ်တာကို ပြန်စဉ်းစားမယ်တဲ့ ဝယ်တာ ပြန်စဉ်းစားမယ်????အလကာပေးချင်တာ ????။တနသာင်္ရီ ကော့သောင်းဘက် ပင်လယ်ပြင်မှာ စကာင်္ပူ ကအလကားသဲခိုးစုတ် နေတာ ကြာလှပေါ့။
မိုးညုင်းမြို့ က မီးရထားဝန်ထမ်းစက်ခေါင်းအုပ်၊စက်ခေါင်းမောင်း အပါအဝင် ၄၄ ယောက်ကို ဆိခိုးရောင်းလို့ တဲ့ အလုပ်က နေရပ်စဲလိုက်တယ်တဲ့ ။တကယ်မပါတဲ့ သူတော့မပါစေချင်ပါဘူး ။လုပ်သက် က ၃ဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ ပါဘဲ။နောင်လူတွေ မှတ်အောင်။ဒါပေမဲ့သူတိုက ့က သမ္မတကြီး ဆီ ကို အသနားခံစာတင်မယ်တဲ့.တကယ်ထုတ်သင့်တာ အရင်းတွေပါ။အဖျား ကအရေးမကြီးပါဘူး။နိုင်ငံကို မရောင်းစားနိုင်ပါဘူး။
ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ ညနေ ၄နာရီမှာ UMFCCI(ball room) မှာ ပြည်ထောင်စုသစ်နဲ့ လိုက်လျှောညီထွေ ဖြစ်မဲ့ဥပဒေအခြေခံ အဆောက်အဦးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲကို ဦးသန်းမောင်(စစ်တွေ)မှ ဟောပြောမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းပေးအပ်ပါတယ်။
ဩဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့မှာ ရခိုင်းမှာ ရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းများအလှုအတွက် ရခိုင်ဂီတ ပွဲတော်ကို အမျိုးသားကဇာတ်ရုံကြီးမှာ တင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း
သိလို့တတ်လို့ ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။မှားတာများထောက်ပြပြောဆို နိုင်ပါတယ်။
ဟိုတစ ဒီတစ သတင်းလေးတွေဆိုပေမယ့် သိစေချင်တဲ့အချက်လေးတွေပါတာမို့
အချိန်နည်းတဲ ့ကျုပ်တို ့အတွက်တော့ok ပါတယ်
ကိုဆိမ်းကျော် ရဲ ့ကိုယ်ပိုင်သိထားတာလေးတွေ ပါ ထည့်ပေးတော့
ကော့သောင်းဘက်က ပင်လယ်ပြင်မှာ သဲခိုးစုပ်နေကြတယ် ဆိုတာနဲ ့ပတ်သက်ပြီး
မြန်မာ့ရေတပ် နဲ ့ပြဿနာ မတက်ကြဘူးလားလို ့အတွေးပွားမိတယ်ဗျာ
ဦးသိန်းညွန် ့ကိုဖုန်းနဲ ့ခြိမ်းခြောက်တဲ့နေရာမယ် ဘယ်လိုဖုန်းမျိုးပါလိမ့်သိချင်သား။
ပထမ ဆက်တာ ဝ၁ ကုဒ်နဲ့ နောက်၂ခါက ဟန်းဖုံးနဲ့လို့ပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကို ၂၄-၀ရ နေ့ထုတ် popular myanmar news journal မှာ တွေ့နိုင်ပါကြောင်း